War bixinta abaaraha Puntland
Abaaraha hadda ka jira Somalia gaar ahaan puntland waa natiijo ka dhalatay ilaa saddex xilli roobaad oo la waayay, ama si waafi ah aan uga di’in deeganada puntland, seejinta roobkaasi seejiyay waxa ka dhashay in ay qallalaan baraagihii biya roobaadka lagu kaydsan jiray, in biyihii ceelasha yaryar la waayo, iyo in ay biya yareeyaan ceelashii riigagu oo ay ku filnaan waayaan dadkii iyo xoolihii.
Dhulka puntland oo awalba ahaa saxara u eke ayaa waxa abaarahaasi dhaliyeen in ay xoolihii waayaan, geed sare oo ay daqaan iyo wax ay dhulka ka soo qaadaan (caws, xaab) geedahaas oo intooda badani qallaleen maadama ay ku noolaayeen biyaha roobka.
Xoolaha oo ah meesha kaliya ee dadka reer miyiga ah noloshoodu ku tiirsantahay ayaa bilaabay in ay u dhintaan macaluul iyo haraad. Dadka xoola dhaqatada ah qaarkood oo la waraystay ama la booqday waxa ka dhintay xoolohoodii in ka badan 70% , taasoo micneheedu yahay in qofkii lahaa 100 neef ay usoo hareen 30 neef oo kaliya, qaarkood xoolihii oo nool ayay ka tageen ka dib markii ay la kici waayeen macaluul iyo tabar darro.
Dadka abaaruhu saameeyeen oo barakacay saddexdii bilood ee ugu dambeeyey waxa lagu qiyaasay 1,250,000 oo qof ama 178571 qoys. Dadkaas oo aan haysan markii horaba cunto iyo biyo ku filan, durufaha ay dhalisay abaartu waxay ku qasbanaadeen inay kala qaybqaybiyaan intii yarayd ee xoolaha uga hartay iyagoo mid walba eegaya halkaa uu ku sii ciriqi karo, taasoo dhalisay in cuntadii iyo biyihii yaraa oo ay haysteen ay kala qaybiyaan taasoo aan qaybsami karin markii horaba, waxa dhacda in cuntada hal meel inta lagu kariyo loo safriyo qof meesi kale la jiray muddo dheer.
Saamayntii abaartani keentay
In dadkii ay lasoo dersaan cuduro ka dhashay abaarta iyo gaajadda
In dadkii miyiga iyo tuulooyinka degana ay wajahaan barakac taas oo jaah wareer ku keeni karta maaraynta noloshoda cusub
In ay dhacaan xaaladda dhimasho oo ka dhaan kara haraadka iyo gaajadda
In ay dhaqaalihii wadanka ay abaaruhu si ba’an u saameeyso maadaamada ay xoolaha nooli ahaayen laf dhabarta dhaqaalaha ee wadanka
Maxay dadkaasi u baahanyihiin
in cunto lala gaaro
in biyo dhaamis la sameeyo
in ceelal looga qodo deegaanadooda
in daawooyin degdeg ah lala gaaro
in la diyaariyo meelo si ku meel gaar ah biyaha loogu kaydiyo
in la diyaariyo teendhooyin ay hooy ka dhigtaan dadka iyo xoolaha tabarta daran
Maxaa inala gudboon ka bulsha ahaan
In umaddu dareento dhibka walaalohood haysta si dagdag ahna gurmad u bilowdo
In hal ku dhageenu noqdo qofkii qof badbaadiyaa wuxu badbaadiyay umadd.
In culimadu istaagaan ka hadlaan abaaraha iyo xaalada jirta
In qof walba wuxuu awoodo uu la dagdago oo uusan dib dhigan.